Hay’adaha Sharci fulinta Puntland oo ka wada-hadlay caddaalad u helidda tacadiyada ku dhaca haweenka – Ophrd
Xafiiska Difaacaha Xuquuqda Aadanaha ayaa isku soo duba-riday shirka daneeyayaasha Xuquuqda Aadanaha Puntland, kaas oo bil walba dhaca isla markaasna badankiis xoogga lagu saaro xaaladaha taagan iyo wax ka qabashadooda.
Kulankan oo ay ka soo qayb-galeen hay’adda sharci fullinta ee dowladda ee kala ah Xeer Ilaalinta guud, hay’adda foreensig Sayniska oo ay wehliyeen wasaaradda caddaaladda iyo xafiiska difaacaha ayaa looga hadlay caddaalad u helidda tacaddiyada ku dhaca haweenka.
Madaxda hay’adahaas iyo hawl-wadeenno farsamo oo kulanka joogay ayaa isku raacay habab ay u wada shaqayn si hoos loogu dhigo tacaddiyada ka dhanka ah haweenka.
Wada-shaqaynta ay hay’adahaas ka sameeyeen wax ka qabashada falkii kufsiga iyo dilka isugu jiray ee Caasho Ilyaas iyo kiisas kale oo u qaab ekaa ayaa lagu soo qaaday kulanka, kuwaas oo qaarkood ay hadda hay’ahadaas gacanta ku hayaan qaarna ay gacanta ugu miraan Garsoorka.
Difaacaha Xuquuqda Aadanaha dowladda Puntland Maxamed Yusuf Cali wuxuu kulanka kadib warbaahinta u sheegay in ay diyaarinayaan isla markaasna qaybin doonaan hagaha adeeg-bixiyaasha oo xog dhamaystiran ku koobnaan doonto isla markaasna farriimo lagu dari doono.
← Xafiiska Difaacaha oo haweenka Garowe ku tababaray Bedqabka gabdhaha, si looga feejignaado tacadiyadda	Kormeerka degmooyinka Bari, Guardafu, Sanaag, Haylan iyo Karkaar ee Kooxda Kormeerka Wadajirka – Sawirro →